Okokuzithokozisa okungu-10 ongahlala eNew York | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | América, United States, General, ENew York
INew York, indawo ekude kodwa esiyazi sonke ngekhanda, kusukela ezitaladini zayo kuya ezikhumbuzweni zayo eziyizifanekiselo. Akusizi ngalutho ukuthi yindawo lapho kutholwa khona uchungechunge nama-movie, iBig Apple, elinye lamadolobha abaluleke kakhulu e-United States. Uma ube nenhlanhla ngokwanele yokuhlela i- uhambo oluya new york, bhala phansi lezi zimo eziyi-10 okufanele uhlale kuzo kuleli dolobha elimangalisayo.
Ungase ucabange ukuthi okuhlangenwe nakho okuyishumi kuphela akwanele edolobheni elikhulu njengeNew York, futhi uzobe uqinisile, kuthatha izinsuku eziningi ukukuzwa ngokugcwele. Kodwa-ke, siyakutshela Izinto eziyi-10 ezibonakala zibaluleke kakhulu kithi uma kukhulunywa ngokuvakashela leli dolobha elixakekile nelinabantu abahlukahlukene.
1 Buka ukushona kwelanga e-Empire State Building
2 Thatha uhambo ngetekisi eliphuzi
3 Hamba noma ugijime eBrooklyn Bridge
4 Vakashela iTimes Square ebusuku
5 Vakashela isikhumbuzo se-One World Trade Center
6 Iya emculweni we-Broadway
7 Yiba nepikiniki eCentral Park
8 Lalela ivangeli eHarlem
9 Yenza ubuciko be-Moma
10 Khuphuka iSitatimende Sokukhululeka
Buka ukushona kwelanga e-Empire State Building
Wonke umuntu uyazi uMbuso Wombuso, leso sakhiwo leso iminyaka yayiphakeme kakhulu edolobheni, kuze kube kwakhiwa imibhoshongo yeWorld Trade Center, okwathi ngemuva kokuhlaselwa kukaSepthemba 11, 2001 yabhidlizwa, okwenza uMbuso Wombuso waba phezulu. Manje i-One World Trade Center iyamshaya futhi.
Uma sizovakashela eNew York ngeke siyeke ukukhuphukela e-Empire State Building. Lesi sakhiwo sinezindawo zokubuka ezimbili, esitezi sama-86 kanye kwi-102, futhi kungenxa yokugcina lapho sizoba nemibono emihle kakhulu uma sifuna ukubona ukushona kwelanga kweNew York City.
Thatha uhambo ngetekisi eliphuzi
I-Los Amatekisi aseNew York Bavele kumafilimu amaningi, futhi ngokungangabazeki sebevele beyidolobha. Kufana nokugibela amabhasi abomvu eLondon, kumele nakanjani! Sizozizwa njengeNew Yorkers eyiqiniso uma sithatha elinye lala matekisi siye endaweni ethile edolobheni. Kodwa-ke, uma sifuna ukonga, kungcono ukuhamba nomasipala, kepha singakwazi ukuthenga uhambo oluncane kula matekisi aphuzi.
Hamba noma ugijime eBrooklyn Bridge
Leli bhuloho belilikhulu Umsebenzi wobunjiniyela wekhulu le-XNUMX, nezintambo zalo zensimbi umqondo omusha owenze ibhuloho elingahambisani nhlobo. Inemizila yezimoto eyisithupha nendlela yokuhamba amabhayisikili nabahamba ngezinyawo, esikubonile nakumabhayisikobho nakuchungechunge. Ibhuloho elikhanyiswe ebusuku kusukela ngawo-80 ukugcizelela ubuhle balo nesitayela se-neo-Gothic.
Vakashela iTimes Square ebusuku
ITimes Square maphakathi nedolobha, ku i-manhattan ephelele, indawo lapho izindawo eziningi ziwela khona, nalapho kufanele sihambe khona, imini nobusuku. Kunezitolo, imigoqo esezingeni eliphezulu futhi ngaphezu kwazo zonke izibonakaliso ezikhanyayo ezingenakubalwa ezivusa izinzwa zethu. Akunakwenzeka ukuthi ungathathwa yi-maelstrom yale ndawo yedolobha.
Vakashela isikhumbuzo se-One World Trade Center
Sonke siyawazi umlando we 11/2001 ngo-XNUMX futhi siyabalandela kuthelevishini. Yebo, endaweni lapho kwakukhona khona iTwin Towers, bakhe iSikhumbuzo sokukhumbula bonke abahlukumezekile, kanti kule ndawo kukhona i-One World Trade Center, isakhiwo esisha kunazo zonke edolobheni.
Iya emculweni we-Broadway
I-Los Umculo womculo obanzi Bezungeze umhlaba wonke, futhi le ndawo yedolobha inobuciko obukhulu. Asikwazi ukuhamba ngaphandle kokubona eminye yale mculo yamanje, ekhulayo, futhi emele uhlobo oluthile lokuzijabulisa. Amakati, i-Cabaret noma i-Les Miserables ngamanye ama-classics awenze waba mkhulu ku-Broadway.
Yiba nepikiniki eCentral Park
ICentral Park yiyona iphaphu eliluhlaza lomuzi, futhi ngokungangabazeki sizwile ngale nsimu enkulu enezindawo eziluhlaza nezikhala zokuphumula nokubaleka kancane empilweni yasedolobheni. Uma sikhathele i-asphalt nezakhiwo ezingaka futhi sidinga ukuthula okuncane, singaya eCentral Park. Kunezindawo eziningi, futhi lapho isimo sezulu esihle sifika abantu baseNew York bachitha usuku lapho, bathamele ilanga noma babe nepikinikini, njengoba uthanda.
Lalela ivangeli eHarlem
Ukube ubuzwile nge Indawo yaseHarlem njengendawo egcwele ubugebengu, buthule, ngoba manje sekuyindawo ethule kakhulu, esibe yindawo yabavakashi kakhulu. Ingenye yezindawo eziyiqiniso eNew York City nendawo lapho ungajabulela khona ivangeli, kungaba kumidlalo yomculo noma ukuhlala kwenye yalezo zindimbane zoqobo.
Yenza ubuciko be-Moma
IMoma yi- ICity Museum Yobuciko Banamuhla, futhi yize sithola imisebenzi eminingi yokuhamba, kukhona neminye imisebenzi engaguquki yabadwebi abanjengoDalí noma uPicasso. Indawo ongafuna kuyo ubuciko nemidwebo eyaziwayo emhlabeni wonke njenge-Starry Night kaVan Gogh.
Khuphuka iSitatimende Sokukhululeka
Asikwazanga ukuhamba ngaphandle kokuncoma khuphuka iSitatimende Sokukhululeka. Into yokuqala abafuduki abafika ngayo ngesikebhe edolobheni babona kanye nophawu lokuzimela kwabo. Namuhla esinye sezimpawu zedolobha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Okokuzithokozisa okungu-10 ongahlala eNew York
Umhlahlandlela wokuvakashela eMoscow